ဂလိုကျဒါစီးပွီး ဒရမျတီးသူ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ကွညျ့ရှုသူမြားပွီး နာမညျကွီးနပေါတယျ .... ။ - SANTHITSA
အှနျလိုငျးပျေါမှာ ထူးထူးခွားးခွား ဖွဈစဉျတှေ ရီစရာကောငျးတဲ့ ဖွဈစဉျတှကေ မကွာခဏဆိုသလိုပဲ ပျေါလာလရှေိ့ပါတယျ ။ အခုလညျး တူရကီနိုငျငံက လူတဈယောကျက အဖျောနဲ့ အတူ ဂလိုကျဒါစီးရငျးက လထေဲမှာ ဒရမျတီးပွခဲ့တဲ့ အကွောငျးက လိုငျးပျေါမှာ ပွနျ့နှံ့နပေါတယျ ။
တူရကီ ဂီတပညာရှငျ အာမတျစလဈဟာ တူရကီနိုငျငံ တီကာဒကျရျှ ပွညျနယျက တောငျတနျးတှပေျေါကနေ မွပွေငျမီတာ၆၀၀ အမွငျ့မှ သူ့ရဲ့ ဒရမျကို လှယျကာ အဖျောတဈယောကျ နဲ့ အတူ ဂလိုကျဒါ စီးပွခဲ့တာပါ ။
အခုလိုငျးပျေါကို သူတငျလိုကျတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျက ပလူပြံ သှားပါတယျ ။ သူကတော့ ဂလိုကျဒါစီးရငျ ဒရမျကို သကျတောငျ့သကျသာ တီးပွီး သီခငျြး ဆိုပွသှားခဲ့ပါတယျ ။
အဲ့ဒိလိုပဲ တူရကီက စကျဘီးစီးသမား ဟာဆနျကာဗယျကလညျး ရီဗာရီယာတောငျပျေါကနေ ဂလိုကျဒါစီးဆငျး နခြေိနျမှာ တီဗီကွညျ့ပွီး ဆငျးသကျခဲ့ပါတယျ ။ သူတို့က ဂလိုကျဒါမှာ အပိုပါတဲ့ ထိုငျခုံလေးပျေါကနေ လိုကျလာခဲ့တာပါ ။
ဂလိုကျဒါ စီးတဲ့အခါမှာ အစီးသငျတဲ့ သူတှအေတှကျ အပိုခုံလေးတဈခုံကို ထားလရှေိ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒိ ခုံဆိုတာကလညျး သိုငျးကွိုး နဲ့ သိုငျးထားရတဲ့ ပုခကျ တဈမြိုးပါ ။ အဲဒိပုခကျမှာ လိုကျစီးတယျ ဆိုပမေဲ့ လှယျလှယျကူကူ စီးလို့တော့ မရပါဘူး ။
လကွေောငျးနဲ့ လိုကျလြောညီထှမှေုရှိအောငျ ခန်တာကိုယျကို ပွုပွငျ ထိနျးသိမျး ရပါတယျ ။ မစီးတတျရငျ ဂလိုကျဒါကို ထိနျးသိမျးရတဲ့ သူက လပေျေါမှာ ဘယျလိုမှ အဆငျမပွဘေူး ဖွဈရပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ အစီးသငျတဲ့သူတှကေို လထေဲမှာ ခဏပဲ ဝဲပွီး ပွနျဆငျးရလေ့ ရှိပါတယျ ။
အဲ့ဒိလို အခွအေနမှော ဒရမျတီးပွီး သီခငျြးဆိုပွတဲ့ အာမတျစလဈရဲ့ ဒရမျတီးစှမျးရညျကို လူတှကေ ကွညျ့ပွီး သဘောကလြို့ လိုငျးပျေါမှာ အုတျသွသောငျတငျးဖွဈကွရတာပါ ။
ဂလိုက်ဒါစီးပြီး ဒရမ်တီးသူ လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေ
zawgyiဂလိုက်ဒါစီးပြီး ဒရမ်တီးသူ လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေ …. …. …. ။ ။အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထူးထူးခြားးခြား ဖြစ်စဉ်တွေ ရီစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ် ။ အခုလည်း တူရကီနိုင်ငံက လူတစ်ယောက်က အဖော်နဲ့ အတူ ဂလိုက်ဒါစီးရင်းက လေထဲမှာ ဒရမ်တီးပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းက လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေပါတယ် ။ တူရကီဂီတပညာရှင် အာမတ်စလစ်ဟာ တူရကီနိုင်ငံ တီကာဒက်ရှ် ပြည်နယ်က တောင်တန်းတွေပေါ်ကနေ မြေပြင်မီတာ၆၀၀ အမြင့်မှ သူ့ရဲ့ ဒရမ်ကို လွယ်ကာ အဖော်တစ်ယောက် နဲ့ အတူ ဂလိုက်ဒါစီးပြခဲ့တာပါ ။ အခုလိုင်းပေါ်ကို သူတင်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်က ပလူပျံ သွားပါတယ် ။ သူကတော့ ဂလိုက်ဒါစီးရင် ဒရမ်ကို သက်တောင့်သက်သာတီးပြီး သီချင်း ဆိုပြသွားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒိလိုပဲ တူရကီက စက်ဘီးစီးသမား ဟာဆန်ကာဗယ်ကလည်း ရီဗာရီယာတောင်ပေါ်ကနေ ဂလိုက်ဒါစီးဆင်း နေချိန်မှာ တီဗီကြည့်ပြီး ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့က ဂလိုက်ဒါမှာ အပိုပါတဲ့ ထိုင်ခုံလေးပေါ်ကနေ လိုက်လာခဲ့တာပါ ။ ဂလိုက်ဒါစီးတဲ့အခါမှာ အစီးသင်တဲ့သူတွေအတွက် အပိုခုံလေးတစ်ခုံ ကို ထားလေ့ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒိခုံဆိုတာကလည်း သိုင်းကြိုး နဲ့ သိုင်းထားရတဲ့ ပုခက် တစ်မျိုးပါ ။ အဲဒိပုခက်မှာလိုက်စီးတယ်ဆိုပေမဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ စီးလို့တော့မရပါဘူး ။ လေကြောင်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် ခန္တာကိုယ်ကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ရပါတယ် ။ မစီးတတ်ရင် ဂလိုက်ဒါကို ထိန်းသိမ်းရတဲ့ သူကလေပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူး ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အစီသင်တဲ့သူတွေကို လေထဲမှာ ခဏပဲ ဝဲပြီး ပြန်ဆင်းရလေ့ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒိလိုအခြေအနေမှာ ဒရမ်တီးပြီး သီချင်းဆိုပြတဲ့ အာမတ်စလစ်ရဲ့ ဒရမ်တီးစွမ်းရည်ကို လူတွေက ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ လိုင်းပေါ်မှာ အုတ်သြသောင်တင်းဖြစ်ကြရတာပါ ။မောင်ယဿREF: indian expressPhoto;instargramunicodeဂလိုကျဒါစီးပွီး ဒရမျတီးသူ လိုငျးပျေါမှာ ပွနျ့နှံ့နေ …. …. …. ။ ။အှနျလိုငျးပျေါမှာ ထူးထူးခွားးခွား ဖွဈစဉျတှေ ရီစရာကောငျးတဲ့ ဖွဈစဉျတှကေ မကွာခဏဆိုသလိုပဲ ပျေါလာလရှေိ့ပါတယျ ။ အခုလညျး တူရကီနိုငျငံက လူတဈယောကျက အဖျောနဲ့ အတူ ဂလိုကျဒါစီးရငျးက လထေဲမှာ ဒရမျတီးပွခဲ့တဲ့ အကွောငျးက လိုငျးပျေါမှာ ပွနျ့နှံ့နပေါတယျ ။ တူရကီဂီတပညာရှငျ အာမတျစလဈဟာ တူရကီနိုငျငံ တီကာဒကျရျှ ပွညျနယျက တောငျတနျးတှပေျေါကနေ မွပွေငျမီတာ၆၀၀ အမွငျ့မှ သူ့ရဲ့ ဒရမျကို လှယျကာ အဖျောတဈယောကျ နဲ့ အတူ ဂလိုကျဒါစီးပွခဲ့တာပါ ။ အခုလိုငျးပျေါကို သူတငျလိုကျတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျက ပလူပြံ သှားပါတယျ ။ သူကတော့ ဂလိုကျဒါစီးရငျ ဒရမျကို သကျတောငျ့သကျသာတီးပွီး သီခငျြး ဆိုပွသှားခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒိလိုပဲ တူရကီက စကျဘီးစီးသမား ဟာဆနျကာဗယျကလညျး ရီဗာရီယာတောငျပျေါကနေ ဂလိုကျဒါစီးဆငျး နခြေိနျမှာ တီဗီကွညျ့ပွီး ဆငျးသကျခဲ့ပါတယျ ။ သူတို့က ဂလိုကျဒါမှာ အပိုပါတဲ့ ထိုငျခုံလေးပျေါကနေ လိုကျလာခဲ့တာပါ ။ ဂလိုကျဒါစီးတဲ့အခါမှာ အစီးသငျတဲ့သူတှအေတှကျ အပိုခုံလေးတဈခုံ ကို ထားလရှေိ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒိခုံဆိုတာကလညျး သိုငျးကွိုး နဲ့ သိုငျးထားရတဲ့ ပုခကျ တဈမြိုးပါ ။ အဲဒိပုခကျမှာလိုကျစီးတယျဆိုပမေဲ့ လှယျလှယျကူကူ စီးလို့တော့မရပါဘူး ။ လကွေောငျးနဲ့ လိုကျလြောညီထှမှေုရှိအောငျ ခန်တာကိုယျကို ပွုပွငျ ထိနျးသိမျး ရပါတယျ ။ မစီးတတျရငျ ဂလိုကျဒါကို ထိနျးသိမျးရတဲ့ သူကလပေျေါမှာ ဘယျလိုမှအဆငျမပွဘေူး ဖွဈရပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ အစီသငျတဲ့သူတှကေို လထေဲမှာ ခဏပဲ ဝဲပွီး ပွနျဆငျးရလရှေိ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒိလိုအခွအေနမှော ဒရမျတီးပွီး သီခငျြးဆိုပွတဲ့ အာမတျစလဈရဲ့ ဒရမျတီးစှမျးရညျကို လူတှကေ ကွညျ့ပွီး သဘောကလြို့ လိုငျးပျေါမှာ အုတျသွသောငျတငျးဖွဈကွရတာပါ ။မောငျယဿREF: indian expressPhoto;instargram
Posted by Supernews online media on Monday, July 27, 2020
REF: indian express , Photo;instargram
ဂလိုက်ဒါစီးပြီး ဒရမ်တီးသူ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြည့်ရှုသူများပြီး နာမည်ကြီးနေပါတယ် …. ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထူးထူးခြားးခြား ဖြစ်စဉ်တွေ ရီစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ် ။ အခုလည်း တူရကီနိုင်ငံက လူတစ်ယောက်က အဖော်နဲ့ အတူ ဂလိုက်ဒါစီးရင်းက လေထဲမှာ ဒရမ်တီးပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းက လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေပါတယ် ။
တူရကီ ဂီတပညာရှင် အာမတ်စလစ်ဟာ တူရကီနိုင်ငံ တီကာဒက်ရှ် ပြည်နယ်က တောင်တန်းတွေပေါ်ကနေ မြေပြင်မီတာ၆၀၀ အမြင့်မှ သူ့ရဲ့ ဒရမ်ကို လွယ်ကာ အဖော်တစ်ယောက် နဲ့ အတူ ဂလိုက်ဒါ စီးပြခဲ့တာပါ ။
အခုလိုင်းပေါ်ကို သူတင်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်က ပလူပျံ သွားပါတယ် ။ သူကတော့ ဂလိုက်ဒါစီးရင် ဒရမ်ကို သက်တောင့်သက်သာ တီးပြီး သီချင်း ဆိုပြသွားခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒိလိုပဲ တူရကီက စက်ဘီးစီးသမား ဟာဆန်ကာဗယ်ကလည်း ရီဗာရီယာတောင်ပေါ်ကနေ ဂလိုက်ဒါစီးဆင်း နေချိန်မှာ တီဗီကြည့်ပြီး ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့က ဂလိုက်ဒါမှာ အပိုပါတဲ့ ထိုင်ခုံလေးပေါ်ကနေ လိုက်လာခဲ့တာပါ ။
ဂလိုက်ဒါ စီးတဲ့အခါမှာ အစီးသင်တဲ့ သူတွေအတွက် အပိုခုံလေးတစ်ခုံကို ထားလေ့ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒိ ခုံဆိုတာကလည်း သိုင်းကြိုး နဲ့ သိုင်းထားရတဲ့ ပုခက် တစ်မျိုးပါ ။ အဲဒိပုခက်မှာ လိုက်စီးတယ် ဆိုပေမဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ စီးလို့တော့ မရပါဘူး ။
လေကြောင်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် ခန္တာကိုယ်ကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ရပါတယ် ။ မစီးတတ်ရင် ဂလိုက်ဒါကို ထိန်းသိမ်းရတဲ့ သူက လေပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အစီးသင်တဲ့သူတွေကို လေထဲမှာ ခဏပဲ ဝဲပြီး ပြန်ဆင်းရလေ့ ရှိပါတယ် ။
အဲ့ဒိလို အခြေအနေမှာ ဒရမ်တီးပြီး သီချင်းဆိုပြတဲ့ အာမတ်စလစ်ရဲ့ ဒရမ်တီးစွမ်းရည်ကို လူတွေက ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ လိုင်းပေါ်မှာ အုတ်သြသောင်တင်းဖြစ်ကြရတာပါ ။